Uncategorized | Bishow Nath Kharel
बिग्रँदो वातावरणीय चुनौती
Posted on June 12, 2018 by bishownath
वातावरणीय समस्याले विश्वमै एक चुनौतीपूर्ण समस्याको रुपमा देखापरेको छ । बढ्दो औद्योगिकीकरण र अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्यले मानव सिर्जित नकारात्मक वातावरणीय प्रभावले विश्वका कैयौं देशमा खानेपानीको अभाव सिर्जना भइसकेको छ । यसरी पानी उपभोग गर्ने जनसंख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने र मानवीय गैरजिम्मेवारीकै कारण पानीका स्रोत सुक्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट पानी किनेर खान नसक्ने गरिब मुलुकका जनताको दैनिक जीवनमा निकै ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । वर्षाको अनियमितताले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आइरहेको हुनाले अफ्रिकाका कैयौं देशमा भोकमरी जटिल समस्याका रूपमा देखा परिसकेको छ । यस्तो किसिमको विकराल समस्याको समाधानको लागि बेलैमा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुले युद्धस्तरमा रणनीतिहरु तय गर्नु परेको वातावरण गम्भीररुपमा बिग्रनु मानवीय व्यवहार हो भन्न सकिन्छ । मानवकै अज्ञानको कारणबाट नै वन विनाश, भू–क्षय आदि हुने गरेको छ । सर्वप्रथम वातावरणमा ह्रास ल्याउने मानिस नै हो भने यसको निराकरण गर्ने पनि मानिस हो । पर्याावरण बढ्दै गइरहेको जनसंख्या वृद्धि , सवारी साधनको चाप र औद्योेगिक क्षेत्रबाट निस्कने घातक ग्यासले गर्दा वायु तथा पानीसमेत प्रदूषित बन्दै गएको छ । यसरी विकासशील मुलुकहरुमा कहालीलाग्दो जनसंख्या वृद्धिले गर्दा वन–साधनमा ठूलो चाप पर्न गई भू–क्षय हुने, पहिरो जाने, बाढीको प्रकोप बढ्ने , अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि हुने समस्या देखा परी पर्याावरणीय सन्तुलनलाई प्रतिकुल बनाएको छ । यसरी सारा संसारमा नै वातावरण सन्तुलनमा ह्रास आउनु प्रत्येक व्यक्तिको वातावरण विश्वमै एक चुनौतीपूर्ण समस्याको रुपमा देखापरेको छ । यस्तो किसिमको विकराल समस्याको लागि बेलैमा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुले युद्धस्तरमा रणनीतिहरु तय गर्नुपरेको छ । यसरी सारा संसारमा नै वातावरण सन्तुलनमा ह्रास आउनु प्रत्येक व्यक्तिको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिसँगै हिमालयमा परेको प्रभाव निकै डरलाग्दो देखिन्छ । पाकिस्तान, भुटान, भारत, नेपाल र तिब्बत क्षेत्रमा फैलिएको हिमालय यी क्षेत्रमा पानीको प्रमुख स्रोत हो । विश्व तापमानमा भएको क्रमिक वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ । केही दशक अघिसम्म वर्षैभरि सेताम्य हिउँ देखिने हिमाल कालो ढुङ्गे डाँडामा परिणत भएको यथार्थ हाम्रै आँखासामु छ । यही अनुपातमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्ने हो भने हाम्रा हिमालमा अबको ३० वर्षमै निकै परिवर्तन आउने र त्यहाँबाट आपूर्ति हुने पानीमा निकै कमी आउने इसिमोडलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएका छन् । विश्वमा जनसंख्याको चाप गणितीय रुपमा वृद्धि भएको छ तर जमिन भने एक इन्च पनि बढ्नेवाला छैन । तर, जमिन भने दिनहुँ घट्दो रुपमा रहेको छ । यसले गर्दा प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणमाथि आक्रमण र असन्तुलन बढिरहेको छ । यी कारणले गर्दा ठूलाठूला महामारी र डरलाग्दा रोगहरुको उत्पति भइराखेको वर्तमान परिवेशमा फोहोर मैलाको उचित र वैज्ञानिक रुपले विसर्जन गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति विद्यमान भएको छ । मानव समाजले विज्ञानको चरम सीमामा पुगेर उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । सञ्चारको विकासले गर्दा आजभोलि मानिसहरु विश्वलाई गोबल भिलेज पनि भन्ने गर्दछन्  । मानवले जति जति उन्नति ग-यो उति उति समस्या र सङ्कटहरु आइलागेका छन् । एकातिर सफलताहरु उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण जीव चराचरको साझा घर पृथ्वीमा जीवको लागि ठूलो सङ्कट आइलागेको छ । मानिसले अन्धो भएर एकपक्षीयरुपमा गरेको चरम भौतिक विकासले साझा धर्तीको पर्यापरणीय सन्तुलन क्षतविक्षत भएको छ । मानवजातिको हितको लागि गरिएको विज्ञान प्रविधिको विकासको कारणले गर्दा पृथ्वीको माटो, हावा, आकाश, पानी, प्रकाश आदि तत्वहरु प्रदूषित भएका छन् ।
पृथ्वीको सिर्जना साढेचार अर्ब अघि भए पनि करिब डेढ अर्व वर्षसम्म यसमा कुनै पनि जीवजन्तुको उत्पत्ति हुन सकेन । केही समयपछि मात्र एक कोसीय जीवको अस्तित्वका साथै बीस लाख वर्ष जतिअघि मानिसको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । यिनको उत्पत्ति, विकास र अन्त्य पनि यही प्रकृति मै हुन्छ । त्यसैले एक अर्काको अस्तित्व र सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको छ । प्रकृतिका सन्ततिहरुमध्ये मानिस सर्वश्रेष्ठ उपहार हो । र यसको सम्बन्ध प्रकृतिसँग अरुको भन्दा गहिरो र व्यापक सम्बन्ध छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीको खुड्किलोमा जनसंख्या वृद्धि धेरै जटिल समस्याहरु जन्म भएको छ । यसको असर सोझै प्रकृतिमा पर्न गई वातावरणीय असन्तुलनको स्वरुपको रुपमा आज यसले मानव जातिलाई नै ठाडै चुनौती दिइरहेको छ ।
तेस्रो विश्वका ८० प्रतिशत प्राणीहरुले फोहोर बासस्थानमा जीवन बिताउन बाध्य भएका एकातिर छन् भने अर्कोतिर एक अर्ब तीस करोड प्राणीहरु बासविहीन एवं जटिल अस्वस्थ पर्याावरणमा जीवन निर्वाह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्टार्टिका र आर्टिक क्षेत्रको भीमकाय हिमपहाडहरू विश्वतापमानको वृद्धिसँगै द्रूतगतिमा पग्लिरहेको हुनाले सामुद्रिक सतह बढ्दै गइरहेको र सामुद्रिक तटमा भूस्खलन तथा खिइने क्रम बढिरहेको हुनाले माल्दिभ्स जस्ता कम उचाइ भएका टापुहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ । बढ्दो खडेरी र पानीको अभावले अफ्रिका महादेशका कैयौं क्षेत्रमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ । चरम सुक्खापनले गर्दा जङ्गलहरूमा ठूलाठूला आगलागीका घटना दोहोरिइरहेका छन् । वन्यजन्तुको विनास भइरहेको छ । जडीबुटी मासिने क्रम बढ्दो छ । उत्तरी अमेरिकाका प्रायः सधैं हिउँले ढाकिने पहाडहरू नाङ्गा पहाडहरूमा परिवर्तन भइसकेका छन् । गर्मीको समयमा तातो वायु प्रवाह बढ्नाले समस्त मानव स्वास्थ्यमा निकै प्रतिकुल असर परिरहेको छ । प्रदूषणकोे केन्द्र मानिएका विश्वका हरेक सहर तथा उद्योग धन्धाहरुलाई वर्षेनी दस करोडभन्दा बढी सल्फर डायोअक्साइड हावामा मिसिन्छ । यसले स्वच्छ वातावरणलाई दूषित वा अम्ल वर्षामा परिणत गरिदिन्छ । घना सहरीकरणले ध्वनि प्रदूषित गराई यहाँ धेरै राष्ट्रहरु कोलाहलपूर्ण परिवेशमा बाँचेका छन् । विश्वको सबैभन्दा बढी ध्वनि प्रदूषितकोे रुपमा चिनिने कायरोमा प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत मानिसहरु बहिरा हुन पुग्दछन् । तसर्थ पृथ्वीको बढ्दो उष्णीकरण, ओजोन लेयर पातलिने स्थिति ल्याक होल, अम्लवर्षा, हिमाल पग्लन थाल्नुजस्ता परिणाम भोग्न मानव समुदाय बाध्य भएपछि यसका कारक तत्वहरुवारे अनुसन्धान हुन थाले । यी कुराहरुलाई मध्ये नजर गरी सन् १९९२ जुनमा ब्राजिलको रियोडि जेनेरोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलन भयो । जसले मौसम परिवर्तनका कारक तत्वहरुको नियन्त्रण जैविक विविधताको संरक्षण र एजेण्डा २१ जस्ता महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन र कार्यान्वयनका लागि घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारी तथा व्यापार मौलाउँदै गएको भन्दै विश्वभर यस विषयमा चिन्ता बढ्न थालेको छ । यसबाट जैविक विविधता नै खतरामा परेको भन्दै वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो कदम चालिएको हो । मानवीय क्रियाकलापका कारण वातारवरणमा परिरहेको असर न्यूनीकरणका लागि चेतना जगाउन यो दिवस निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वातावरण मन्त्रालयसहित सरकोकारवाला अन्य संघसंस्थाहरुको सहभागितामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिंदै आएको छ । वातावरणको महत्व झल्काउँदै जिल्ला­जिल्लामा चेतनामूलक -याली पनि निकालिन्छ । वातावरणसम्बन्धी चित्रकलालगायतका रचनात्मक क्रियाकलापहरु गरिन्छ । वातावरण दिवसका अवसरमा सहरी क्षेत्रमा साइकल -याली गरिन्छ । खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण गरिन्छ । काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष वाग्मति सफाइलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रमहरु गरिँदै आएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा वातावरण संरक्षणका हाम्रो देशलगायत विभिन्न देशहरुले आ–आफ्नै कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि वातावरण संरक्षणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिँदैछ । यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि हरेक वर्ष जुन ५ तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिएको थियो । नेपालमा सन् २००० देखि यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । यसरी ५­१६ जुन, १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्राप्त भयो । त्यसैअनुरुप यस दिवसलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनको दोस्रो वर्ष अर्थात् ५ जुन १९७३ मा विश्वमा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवसलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय दिनका रुपमा अङ्गीकार गरिएको थियो । यसैक्रममा विश्वमा प्रतिमिनेट ३२ हेक्टर जमिन रुखविहीन भएका छन् । एउटा मनुष्यलाई प्राण वायुका लागि १२ वटा गोब्रे सल्लाका रुखहरुको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तैगरी एक हुर्किएका सय वर्षका भोजपत्रले करिब आठसय घरका एक वर्षको हावालाई शुद्ध पार्ने कार्य गर्दछ । यस क्रममा एक स्वस्थ भोजपत्रका रुखले सात हजार जीवात्मालाई वासस्थान दिन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ वायु मण्डलमा भएको करिब २१ प्रतिशत प्राणवायु अक्सिजन संसारका प्रत्येक व्यक्तिले स्वास क्रियामा प्रयोग गर्दछन् । एक व्यक्तिका लागि स्वास फेर्ने कार्यका लागि मात्र पनि छ वटा रुखको जरुरत पर्दछ । एउटा स्वस्थ मानिस दिनको २२ सय चोटि सास फेर्छ र यसरी सास फेर्दा उपयोगमा ल्याइएको वायुको महत्व खाएको भोजनको मात्राभन्दा झण्डै २० गुणा बढ्ता हुन्छ । एक वृक्षले सरदर दुई दशमलव सात प्रतिशत केजी प्राणवायु वायुमण्डलमा फ्याँक्छ । प्रतिवर्ष बिरुवाबाट ८० लाखदेखि दुई करोड हेक्टर जङ्गलको विनाश, त्यसबाट लोप भएका १३० जातका जङ्गली चराहरु स्तनधारी जन्तुहरु र १० प्रतिशत फूल फूल्ने जातका रुखहरु वर्षेनी बग्दै गएको माटोको इतिहास, मरुभूमीकरण भएका ८० करोड हेक्टर भूमि र प्रतिवर्ष ६० लाख हेक्टरका दरले उर्वरा भूमि मरुभूमीकरण हुने तथ्यले केही वर्षभित्रमा वातावरणीय र भौगोलिक दृष्टिले समेत पृथ्वीको नक्सा नै बदलिन सक्ने सङ्केत मिलेको छ भने अर्कोतिर सांसारिक सुखभोगलाई वर्तमानमा मात्र केन्द्रित नगरी हाम्रा भावी सन्ततिले समेत समानरुपमा जीवनयापन गर्ने अवसरलाई क्षीण पार्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने भौतिक उन्नतिले क्रमशः उब्जाएका नकारात्मक पक्षहरु विचार गर्दा प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रन गई मानव सभ्यताकै लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
Source : http://www.sulsule.com/news_details/19777/.html-750229.
कृषि कर्ममा खर्बुजाको बढ्दो माग
Posted on June 11, 2018 by bishownath
‘देशको तराई क्षेत्रदेखि लिएर मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा खर्बुजाको माग दिनप्रति दिन बढ्दो रूपमा एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसैगरी, देशको एक मात्र राजधानी काठमाडौं बढ्दो गर्मीसँगै दैनिक ९० मेट्रिक टनभन्दा बढी भारतीय खर्बुजा भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ’
नेपाल कृषि प्रधान देश हुनुको साथसाथै ६५.७ प्रतिशत जनता यसमा निर्भर रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । देशको प्रमुख औद्योगिक उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य भएकोले लगानी मार्फत कृषिमा आधुनिकीकरण तथा बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउन खोजिएको हो । राष्ट्रिय आयको ३८ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान कृषिक्षेत्रबाट नै प्राप्त हुन्छ । वैदेशिक व्यापारको निकासी योग्य वस्तुहरूमा अधिकांश कृषिसँग नै सम्बन्धित छ । प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाकालदेखि सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाकालसम्म कृषिलाई प्रथम प्राथमिकता दिँदै आएको कुरा स्पष्ट छ । यसरी कृषि विकासको लागि ठूलो धनराशी खर्च भएता पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
जबसम्म कृषिको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको चौर्तफी विकास हुन सक्दैन् । कृषिको विकास नभएसम्म प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा बढ्दो जनसंख्याको कारणले गर्दा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो । विश्वव्यापीकरणले गर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको यस शताब्दीमा कृषि क्षेत्रलाई पनि यस्तो परिवर्तनले उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पारेको छ ।
बालीनाली, तरकारी, फलफूल र पशुपंक्षीको किसिम, खेतीपाती गर्ने तौरतरिकादेखि लिएर मानिसको स्वाद, चाहना र आकांक्षासमेतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यस्ता परिवर्तनले हाम्रा सामु ठूलो चुनौती र अवसरहरू देखिएका छन् । मुलुकमा यातायात क्षेत्र क्रान्तिकारी विकास, भौगोलिक परिवेशले उपलब्ध गराएको हावापानीको अवसर र आधुनिक प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना छ ।
विश्वमा चर्किदो खाद्य संकटले गर्दा धन कमाउन सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । यसमा पनि फलफूल खेतीको सम्भावना नेपालमा धेरै देखिएको छ । यसमा मुलुकको भू–बनोटलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि अधिकांश भाग पहाडै पहाडले भरिएको छ । यसले गर्दा ती डाँडाकाँडामा फलफूल खेती गर्न सकिएको खण्डमा ठूलो धनराशी भुक्तानी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनलाई दिनुपर्ने थिएन ।
हाम्रो देशमा उत्पादित फलफूलबाट नै देशको माग बमोजिमको फलफूल आपूर्ति गर्न सकिने थियो । यी फलफूलमध्ये खर्बुजा पनि एक किसिमको महत्वपूर्ण रूपको फलफूल हो । देशको तराई क्षेत्रदेखि लिएर मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा खर्बुजाको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो रूपमा एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसै गरी देशको एक मात्र राजधानी काठमाडौं बढ्दो गर्मीसँगै दैनिक ९० मेट्रिक टनभन्दा बढी भारतीय खर्बुजा भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मुलुकमा मौसम परिवर्तनसँगै बजारमा खर्बुजाको माग अत्यधिक भए पनि हाल नेपाली उत्पादन भने न्यून रहेको सम्बन्धित क्षेत्रले दाबी गरेको छ । यो एक किसिमको गर्मीका लागि उपयुक्त मानिने फलफूल हो । यो हाल कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक ४० देखि ५० मेट्रिक टन भित्रिने गरेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, बल्खुमा दैनिक ३० देखि ४० मेट्रिक टन भारतीय खर्बुजा भित्रिने गरेको नेपाल फलफूल व्यवसायी संघ बल्खुले जनाएको छ । हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरूमा जनकपुर, झापा, वीरगञ्ज, महोत्तरीलगायतका जिल्लाबाट सिजनअनुसार खर्बुजा उपत्यकामा भित्रिने गरे पनि त्यसले वार्षिक १५ देखि २० दिनको मात्र बजारको माग आपूर्ति गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
देशको विभिन्न जिल्लाबाट आयात गरिने खर्बुजाले उपभोक्ताको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिने कारण वर्षैभरि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिने कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजार, बल्खु फलफूल थोक बजार र बालाजुलगायतका बजारमा खर्बुजा प्रतिकिलो २५ देखि ३० रूपैयाँ थोक मूल्यमा कारोबार भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
त्यस्तै, गरी भारतीय बजारमा भने प्रतिकिलो सातदेखि आठ रूपैयाँमा आयात गरेर ल्याउने भए पनि जिविस, गाविसलगायत विभिन्न क्लब र समूहले अनियमितरूपमा बाटो कर असुल्ने गरेको हुनाले राजधानी ल्याएर दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । यो एक ट्रिपमा खर्बुजामा १५ देखि १८ मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न सकिन्छ तर भारतदेखि नेपाली बजारसम्म सामान ल्याइपुर्याउँदा बाटोमा कर मात्र पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
यसको लागि राज्यले जुन ठाउँबाट उत्पादित वस्तु आयात गर्यो सोही ठाउँमा मात्र कर तिरे पुग्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कृषक तथा सम्बन्धीत व्यवसायीहरूलाई निकै नै राहत हुने थियो । यसलाई कृषि विकास गर्ने कृषि मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कृषक एवं उपभोक्ताहरू दुवै मारमा पर्दै आएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका फलफूलहरूको खेती हुन्छ । यसमध्ये खर्बुजा तथा तर्बुजा फलफूल गर्मीको लागि उपयुक्त फल हो ।
देशका विभिन्न भागहरूमा गर्मी समयमा यसको माग बढी रहेको हुन्छ । यसले केही हदमा भए पनि गर्मी हटाउने गर्दछ । यसको प्रयोग दिनहुँ बढ्दो रूपमा भएको पाइन्छ । यसले गर्दा यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । यसकारणले गर्दा मुलुकको विभिन्न सहरी क्षेत्रमा यसको माग दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।
यसको खेती प्रायः गरी तराईका बिस जिल्लालगायत पहाडी भेगमा पनि आयआर्जनको रूपमा खेती गरिएको पाइन्छ । मुलुकका सानास्तरका कृषकहरूको लागि थोरै पुँजीमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । विशेष रूपमा राजधानी काठमाडौँमा मात्रै १ सय ५० मेट्रिक टनको माग रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यसमा १०० मेट्रिक टन भारतीय बजार र छ भने स्वदेशमा उत्पादन ५० मेट्रिक टन खर्बुजा हुने सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको पाइन्छ । खर्बुजा उत्पादनका साधनहरू जस्तै भूमि, श्रम, पुँजी र प्रबन्धलाई उचित प्रयोगद्वारा धेरैभन्दा धेरै उत्पादन कसरी गर्ने र यस व्यवसायबाट धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कसरी कमाउने भन्ने कुरा व्यावसायिक कृषकलाई सिकाउनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र एउटा यस्तो व्यावहारिक ज्ञान हो जसले कृषि व्यवसायमा उत्पादनका साधनहरूलाई आपसमा कुन स्तरमा मिलाउने अथवा साधनहरूलाई कुन अनुपातमा राख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । जसले गर्दा प्रतिइकाई उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा आयआर्जन वृद्धि गरी कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्याउने हुन्छ ।
यसर्थ, कृषि विकास गर्ने निकायको रूपमा रहेको सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयले वेलैमा मुलुकको खर्बुजाको मागलाई आपूर्ति गर्न सकिने खालको यसको खेती विस्तार गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने खर्बुजालाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी खर्बुजाको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ पाइन्छ ।
यसबाट नै देशको ठूलो धनराशी विदेशलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर यसलाई रोकी स्वदेशमा नै स–सानास्तरका किसानहरूबाट यस्ता किसिमको खर्बुजा खेतीको क्षेत्रफल बढाउन सकेको खण्डमा यसको उत्पादनमा विस्तार गर्न सके रोजगारीको साथसाथै प्रतिव्यक्ति आयसमेत वृद्धि हुने कुराको कसैको पनि दुईमत नहोला ।
Source : http://www.souryadaily.com/2018/06/186874.html- 750228.
धूमपानविरूद्ध रोकथाम आवश्यक
Posted on June 8, 2018 by bishownath
धूमपान मानवको शरीरलाई हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्नु कतिको मूर्खता हो यो आफैँमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो । यसको साथै भावना, स्वास्थ अनि जीवनको धारलाई जीवनदेखि मृत्युसम्म कायम राख्ने अविचलीत अंग संयन्त्र मुटुलाई सूर्तिजन्य पर्दाथको सेवनले थप भार नदिऔँ, स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो ।
यस अर्थमा कि धूम अर्थात् धुँवाजन्य कुरा अनि पान अर्थात् सेवन, यसमा चुरोट, गाँजा, कंकड, हुक्का अनि बिँडीलगायत अन्य धेरै धूमपानजन्य कुराहरूका बारेमा आज संसारभरि जनजागरण फैलाइन्छ । संसारभरि हरेक दिन १५ अर्ब चुरोट बिक्दछ भने हरेक मिनेट १ करोड चुरोट बिक्री हुन्छ ।
यसरी हरेक ८ सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यु सूर्ति सेवनका कारणले हुने गर्दछ भने हरेक १० जनामध्ये १ जना वयस्कको अकालमा मृत्यु संसारभरि चुरोट सेवनकै कारणले हुने गर्दछ । यस्तै क्रम चलिरहने हो भने सन् ०३० सम्ममा चुरोट सेवनले ६ मध्ये एक जना मान्छेको मृत्यु गराउने विश्वव्यापी तथ्यांकगत पूर्वानुमान गरिएको छ ।
यसर्थ युद्ध, हिंसा, अपराध, आत्महत्या, दुर्घटना आदिजस्ता थुप्रै मृत्युका कारणलाई लगभग दोब्बर पार्दा पनि धूमपानका कारणले हुने मृत्युको संख्या भन्दा धेरै हुन सक्दैन । स्मरण रहोस् संसारभरिका धेरैजसो ठूला ठूला सूर्तिजन्य व्यवसायहरू औँलामा गत्र सकिने केही मात्र उधोगपतिहरूको नियन्त्रणमा छ । धूमपानको कुलतबाट विश्वमा प्रत्येक सेकेन्डमा १ जना, प्रतिदिन ११ हजार जना र प्रतिवर्ष ५० लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
तर, ५० लाख मृत्युलाई रोक्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ठोस प्रयास नगरिएमा यो संख्या सन् ०२० सम्ममा दोब्बर हुनेछ । यस्तो महामारीको प्रकोप, धूमपानको दुष्परिणामबाट ७० प्रतिशत व्यक्तिहरूको मृत्यु केवल विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मात्रै हुने गरेको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ । धूमपान अहिले विश्वका एक अर्ब ३० करोड व्यक्तिहरूले गर्ने अनुमान छ ।
धूमपानले क्यान्सर हुन्छ र यसको कारण धूमपानको कुलतबाट हुन जाने दुष्परिणामको सन्दर्भमा गरिएको अनेकौँ अन्वेषणात्मक अध्ययनहरूबाट थाहा भएअनुसार तमाखुमा करिब ४०० भन्दा बढी त्यस्ता रासायनिक विषालु कुतत्वहरू छन् जो व्यक्तिको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक एवं असाध्य रोगका कारक रहेका छन् ।
त्यसमध्ये ४८ वटा तत्वहरू यस्ता छन् जो सोझै क्यान्सर रोगको कारण हुन सक्छन् । र नेपालमा पनि बर्सेनि २५ हजार मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रको दाबीे छ । निष्क्रिय धूमपानकै कारण नेपालमा दुई सय ग्रामभन्दा कम तौलका शिशुहरूको जन्म हुन्छ र योसँगै क्षयरोगीको संख्या बढिरहेको छ ।
एक सर्वेक्षणमा मुलुकको ८५ प्रतिशत घरमा न्यूनतम एक व्यक्तिले धूमपान गर्ने गरेको पाइएको छ भने त्यसमा १५ प्रतिशत व्यक्ति १० वर्षको उमेर नपुग्दै सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन सुरू गर्ने गरेको छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरूषद्वारा कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको पाएको छ ।
यसर्थ सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण भेगका बढी मानिसहरू सूर्तिजन्य सेवनबाट मृत्यु हुने गर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा बढी सूर्ति सेवन गर्ने भेग हिमाली क्षेत्र हो भने जसमा जुम्ला जिल्ला सबैभन्दा बढी सूर्ति सेवन गर्ने जिल्लामा गनिन्छ । यस्तो किसिमको कुलतलाई जोगाउन आफ्नो घर, टोल र समाजमा धूमपान विरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
धूमपान गर्नेको संख्या हाम्रो मुलुकममा प्रतिवर्ष बढ्दो छ । धूमपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू यस अम्मलीलाई हतपत त्याग्दैनन् अशिक्षित तथा गरिब समुदायका कैयौँ व्यक्तिहरू यसबाट हुने प्रतिकूल असरबाट अनभिज्ञ हुनाका कारणले पनि धूमपान गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षित र प्रतिष्ठित समुदायमा भने यसको कुप्रभावबारे यथेष्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि आँखा चिम्लने गरेको पाइन्छ ।
धूमपान गर्नेहरूले छोडेको धुवाँले वरपर बसेकाहरूलाई पनि असर पार्दछ । धूममानमा पाइने मुख्य तत्वहरू निकोटिन, टार र कार्बनमोनो अक्साइड हुन् । यसका साथै धूममानमा चार हजार प्रकारभन्दा बढी विशाक्त पदार्थहरू पनि हुन्छन् भने तीमध्ये दुईदेखि चार सय मानिसको लागि हानिकारक हुने रहेको छ । सूर्ति सेवनका कारण ४० प्रकारका प्राणघातक क्यान्सर गराउने रसायन रहेको हुन्छ ।
त्यसैगरी, प्रतिखिल्ली चुरोटमा २० मिलिग्राम निकोटिन रहेको हुन्छ । तसर्थ ज्यान लिनको लागि २० मिलिग्राम निकोटिन पर्याप्त मानिन्छ । यी रासायनिक पदार्थहरू शरीरका लागि आवश्यक छैनन् बरू स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । धूमपान गर्दा यी रासायनिक तत्वहरू हाम्रो रक्त प्रवाहमा मिसिएर जान्छन् र शरीरका विभिन्न अंगहरूलाई काम गर्न वाधा पुर्याउँछन् ।
त्यसैले धूमपान गर्नु भनेको रोगलाई निम्त्याउनुसरह हुन्छ । अतः धूममानको असरले बच्चाहरूको घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, निमोनिया हुने डर रहन्छ । बच्चा स्वस्थ जन्मेको भए पनि यसले गर्दा रोगी बन्छन् र अकालमै मर्न सक्छन् । गर्भवती महिलाले धूमपान गरेमा शिशुको स्वास्थ्यलाई समेत हानि गर्दछ । धूमपान सेवन गर्ने व्यक्तिलाई दम, खोकी, मुटुको रोग र फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्छ । गर्भवती आमाबाट जन्मिने बच्चा पनि ख्याउटे र कमजोर हुन्छ ।
जीवन छोटो छ, त्यसैले धूमपान गरेर यसलाई अझ छोटो नबनाऔँ अन्त्यमा, यो क्रम चलिरहने हो भने सन् ०३० सम्ममा चुरोट सेवनले ६ मध्ये एकजना मान्छेको मृत्यु गराउने विश्वव्यापी तथ्याकंगत पूर्वानुमान छ । धूमपानको लतमा आजको भोली नै धूमपान गर्न छाड्न पक्कै अप्ठेरो हुनसक्छ, तसर्थ विस्तारै यो लतबाट आफूलाई छुटाउन गरिने कसरतहरू महत्वपूर्ण छ । विश्वभरिका अधिकांश धूमपान गर्ने व्यक्तिहरू साथीभाइको लहिलहैमा लागेर धूमपान गर्न सानै उमेरमा सिक्न पुग्दछन् ।
यसअर्थमा आउँदा पुस्ताहरूमा साथीहरूलाई नरम्रा कुराको प्रस्तावमा कसरी नाई भत्रे जस्ता कुराहरू पनि सिकाउन जरूरी छ । स्वस्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो अनि चुरोटले हिरो हैन पक्कै जिरो बनाउँछ भत्रे कुराहरू बुझाउन जरूरी छ । यसरी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कतिपय व्यक्तिहरू कुलतलाई त्याग्दैनन् भने तिनीहरूले पछि गएर ठूलो भुमरीमा पर्दछन् ।
जलिरहेको सूर्तिमा विभिन्न सात हजारभन्दा बढी हानिकारक तत्वहरू हुने गरेको र यसको सेवनले एक वर्षमा एउटा व्यक्तिको आयु एक महिना घट्ने विद्यालयहरूमा गरिएको एक अध्ययनले १२ देखि १९ वर्षका युवा धूमपानप्रति आकर्षित हुने गरेको र बढीजसो युवा साथीभाइको संगत, आकर्षक विज्ञापन, चलचित्रका दृश्य आदिका कारण त्यसतर्फ आकर्षित हुने गरको देखिएको जानकारी छ । धूमपानले जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
उनीहरू देखासिकीबाट, अरूको लहलहैमा लागेर, उत्सुकतावस तथा ज्ञान बढ्छ भन्ने मिथ्या विश्वासमा परेर यसको सेवन गर्न थाल्छन् । उनीहरू यसको नराम्रो असरबारे अनभिज्ञ नै हुन्छन् । धूमपानले न पेट भर्छ न त ज्ञान बढ्छ त्यसैले आजदेखि धूमपान त्यागौँ र यसको कुलतलाई त्याग गरी स्वस्थ्य जीवन बनाऔँ । तसर्थ, धूमपान के हो ? यसबाट मानवलाई फाइदा र बेफाइदा के के छ भन्ने कुराको जबसम्म राम्ररी ज्ञान हुन सक्दैन तबसम्म यो समस्याबाट मुक्त हुन सकिदैन ।
त्यसकारण हामीहरूले आ–आफ्ना केटाकेटीहरूलाई राम्रो संस्कार, चेतना, र शिक्षा दिनु जरूरी छ । अर्को कुरा व्यक्तिको धारणा जबसम्म गलत रहन्छ तबसम्म उसले नशालाई त्याग्न सक्दैन । किनकी यसलाई हाम्रो समाजबाट हटाउन जनचेतना, शिक्षा, यसको अवगुणको बोध आदि कुरामा बेलैमा सचेत भएको खण्डमा मात्र हाम्रो समाजले यस्ता किसिम लतलाई परित्याग गर्नु अति आवश्यक भएको छ ।
Source : http://www.souryadaily.com/2018/06/186621.html-750225.
विश्व वातावरण दिवस: पर्यावरणमा बढ्दो चुनौती
Posted on June 5, 2018 by bishownath
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि हरेक वर्ष जुन ५ तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा सन् २००० देखि यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । यसरी ५­ जुन, १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो’
लेखक -विश्वनाथ खरेल
पर्यावरण विश्वमै एक चुनौतीपूर्ण समस्याको रूपमा देखापरेको छ । वातावरण गम्भीर रूपमा बिग्रनुको कारण मानवीय व्यवहार हो । मानवकै अज्ञानको कारणबाट नै वन विनाश, भूक्षय आदि हुने गरेको छ । वातावरणमा ह्रास ल्याउने मानिस नै हो भने यसको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि मानिसकै हो ।
जनसंख्या वृद्धि, सवारी साधनको चाप र औद्योेगिक क्षेत्रबाट निस्कने घातक ग्यासले गर्दा वायु तथा पानीसमेत प्रदूषित बन्दै गएको छ । विकासशील मुलुकहरूमा कहालीलाग्दो जनसंख्या वृद्धिले गर्दा वन–साधनमा ठूलो चाप पर्न गई भूक्षय हुने, पहिरो जाने, बाढीको प्रकोप बढ्ने, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि हुने समस्या देखा परी पर्यावरणीय सन्तुलनलाई प्रतिकूल बनाएको छ ।
यस्तो किसिमको विकराल समस्याको लागि बेलैमा विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले युद्धस्तरमा रणनीतिहरू तय गर्नु परको छ । यसरी सारा संसारमा नै वातावरण सन्तुलनमा ह्रास आउनु प्रत्येक व्यक्तिको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विश्वमा जनसंख्याको चाप गणितीय रूपमा वृद्धि भएको छ तर, जमिन भने दिनहुँ घट्दो रूपमा रहेको छ । यसले गर्दा प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणमाथि आक्रमण र असन्तुलन बढिरहेको छ ।
यी कारणले गर्दा ठूलाठूला महामारी र डरलाग्दा रोगहरूको उत्पत्ति भइराखेको छ । फोहोर मैलाको उचित र वैज्ञानिक रूपले विसर्जन गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति विद्यमान छ । मानव समाजले विज्ञानको चरम सिमामा पुगेर उल्लेखनीय उपलब्धीहरू हासिल गरेको छ । सञ्चारको विकासले गर्दा आजभोली मानिसहरू विश्वलाई ग्लोबल भिलेज पनि भन्ने गर्दछन् । मानवले जति जति उन्नति गर्यो उति उति समस्या र संकटहरू आइलागेका छन् ।
एकातिर सफलता तथा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण जीव चराचरको साझा घर पृथ्वीमा जीवको लागि ठूलो संकट आइलागेको छ । मानिसले अन्धो भएर एकपक्षीय रूपमा गरेको चरम भौतिक विकासले साझा धर्तीको पर्यापरणीय सन्तुलन क्षतविक्षत भएको छ । मानवजातिको हितको लागि गरिएको विज्ञान प्रविधिको विकासले गर्दा पृथ्वीको माटो, हावा, आकाश, पानी, प्रकाश आदि तत्वहरू प्रदूषित भएका छन् ।
पृथ्वीको सिर्जना साढे चार अर्ब वर्ष अघि भए तापनि करिब डेढ अर्ब वर्षसम्म यसमा कुनै पनि जीवजन्तुको उत्पत्ति हुन सकेन । केही समयपछि मात्र एक कोशीय जीवको अस्तित्वका साथै बीस लाख वर्ष जति अघि मानिसको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । यिनको उत्पत्ति, विकास र अन्त्य पनि यहि प्रकृति मै हुन्छ । त्यसैले एक अर्काको अस्तित्व र सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको छ । प्रकृतिका सन्ततिहरूमध्ये मानिस सर्वश्रेष्ठ उपहार हो ।
र, यसको सम्बन्ध प्रकृतिसँग अरूको भन्दा गहिरो र व्यापक छ । आजको २१औँ शताब्दीको खुड्किलोमा जनसंख्या वृद्धि धेरै जटिल समस्या बनेको छ । यसको असर सोझै प्रकृतिमा पर्न गई वातावरणीय असन्तुलनको स्वरूपको रूपमा आज यसले मानव जातिलाई नै ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । तेश्रो विश्वका ८० प्रतिशत प्राणीहरू फोहोर वासस्थानमा जीवन बिताउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर १ अर्ब ३० करोड प्राणीहरू वासविहीन एवं जटिल अस्वस्थामा छन् ।
बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी सल्फर डायोअक्साइड हावामा मिसिन्छ । यसले स्वच्छ वातावरणलाई दूषित वा अम्ल वर्षामा परिणत गरिदिन्छ । घना सहरीकरणले ध्वनि प्रदूषित गराउँछ । धेरै राष्ट्रहरू कोलाहलपूर्ण परिवेशमा बाँचेका छन् । विश्वको सबैभन्दा बढी ध्वनि प्रदूषित सहरको रूपमा चिनिने कायरोमा प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत मानिसहरू बहिरा हुन पुग्दछन् ।
तसर्थ पृथ्वीको बढ्दो उष्णीकरण, ओजोन लेयर पातलिने स्थिति ब्ल्याक होल, अम्लवर्षा, हिमाल पग्लन थाल्नुजस्ता परिणाम भोग्न मानव समुदाय बाध्य भएपछि यसका कारक तत्वहरूवारे अनुसन्धान हुन थाले । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरी सन् १९९२ जुन ५ मा ब्राजिलको रियोडी जेनेरोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलन भयो । जसले मौसम परिवर्तनका कारक तत्वहरूको नियन्त्रण जैविक विविधताको संरक्षण र एजेन्डा २१ जस्ता महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन र कार्यान्वयनका लागि घोषणा गर्यो ।
वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकारी तथा व्यापार मौलाउँदै गएको भन्दै विश्वभर यस विषयमा चिन्ता बढ्न थालेको छ । यसबाट जैविक विविधता नै खतरामा परेको भन्दै वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो कदम चालिएको हो । मानवीय क्रियाकलापका कारण वातारवरणमा परिरहेको असर न्युनीकरणका लागि चेतना जगाउन यो दिवस निकै महत्वपूर्ण अवसर हो ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वातावरण मन्त्रालय सहित सरकोकारवाला अन्य संघसंस्थाहरूको सहभागितामा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको छ । वातावरणको महत्व झल्काउँदै जिल्ला­जिल्लामा चेतनामूलक ¥याली पनि निकालिन्छ । वातावरण सम्बन्धी चित्रकला लगायतका रचनात्मक क्रियाकलापहरू गरिन्छ । वातावरण दिवसका अवसरमा सहरी क्षेत्रमा साइकल र्याली गरिन्छ । खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरिन्छ ।
काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष बागमति सफाइ लगायतका अभियानमुखी कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा वातावरण संरक्षणका लागि विभित्र कार्यक्रम गरी विश्वभर वातावरण दिवस मनाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि हरेक वर्ष जुन ५ तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा सन् २००० देखि यो दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
यसरी ५­१६ जुन, १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्राप्त भयो । त्यसै अनुरूप यस दिवसलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनको दोश्रो बर्ष अर्थात् ५ जुन १९७३ मा विश्वमा पहिलोपटक विश्व वातावरण दिवसलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय दिनका रूपमा अंगिकार गरिएको थियो ।
विश्वमा प्रतिमिनेट ३२ हेक्टर जमिन रूखविहीन भएका छन् । एउटा मनुष्यलाई प्राण वायुका लागि १२ वटा गोब्रे सल्लाका रूखहरूको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै गरी, एक हुर्किएका सय वर्षका भोजपत्रले करिब आठ सय घरका एक वर्षको हावालाई शुद्ध पार्ने कार्य गर्दछ । यस क्रममा एक स्वस्थ भोजपत्रका रूखले सात हजार जीवात्मालाई वासस्थान दिन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ वायु मण्डलमा भएको करिब २१ प्रतिशत प्राणवायु अक्सिजन संसारका प्रत्येक व्यक्तिले स्वास क्रियामा प्रयोग गर्दछन् ।
एक व्यक्तिका लागि स्वास फेर्ने कार्यका लागि मात्र पनि ६ वटा रूखको जरूरत पर्दछ । एउटा स्वस्थ मानिस प्रतिमिनेट १२ देखि २० पटक सास फेर्छ र यसरी सास फेर्दा उपयोगमा ल्याइएको वायुको महत्व खाएको भोजनको मात्राभन्दा झण्डै २० गुणा बढ्ता हुन्छ । एक वृक्षले सरदर २ दशमलव ७ केजी प्राणवायु वायुमण्डलमा फ्याँक्छ । तर प्रतिवर्ष बिरूवाबाट ८० लाखदेखि २ करोड हेक्टर जंगलको विनाश भएको हुने गरेको छ । प्रतिवर्ष ६० लाख हेक्टरका दरले उर्वर भूमि मरूभूमीकरण हुने गरेको छ ।
यो तथ्यले केही वर्ष भित्रमा वातावरणीय र भौगोलिक दृष्टिले समेत पृथ्वीको नक्सा नै बदलिन सक्ने संकेत मिलेको छ । अर्कोतिर सांसारिक सुखभोगलाई वर्तमानमा मात्र केन्द्रित नगरी हाम्रा भावी सन्ततिले समेत समानरूपमा जीवनयापन गर्ने अवसरलाई क्षीण पार्नु हँुदैन भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । भौतिक उन्नतिले क्रमशः उब्जाएका नकारात्मक पक्षहरू विचार गर्दा प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रन गई मानव सभ्यताकै लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलिएको छ ।
Source : http://www.souryadaily.com/2018/06/186272.html – 750222.
Source : http://www.sulsule.com/news_details/19445.html- 750221.
गणतन्त्रको एक दशक
Posted on May 29, 2018 by bishownath
‘जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । अब त, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ ’
प्रतिनिधिसभाको ४ जेठ ०६३ को बैठकले राजाका धेरै अधिकारको कटौती गर्यो । अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिम ०६४ चैत २८ मा सम्पत्र पहिलो संविधानसभामा राप्रपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्रका पक्षधर भएकाले ०६५ ज्येष्ठ १५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट ’गणतन्त्र’ का समर्थक ९९ प्रतिशत देखिए ।
विश्वको राजनीतिक इतिहासमा धेरै व्यक्ति, एकव्यक्ति, केही व्यक्तिको शासनचक्र चल्दै पुनः धेरै व्यक्तिको शासन व्यवस्था कायमा भएको पाइन्छ । यसको विभित्र रूपमा पुनरावृित्त भइरहन्छ । यस्तै जनचाहनाको रोजाइमा निरंकुशताभन्दा प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्छन् भने अराजकताभन्दा निरंकुशता रोज्छन् । प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्नुको मूल कारण सरकार प्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष दुवै निर्वाचित हुनु हो ।
नेपालमा ००७ सालमा पहिलोपटक आएको प्रजातन्त्रलाई ०१७ सालमा समाप्त गरियो । तत्कालीन राजाको निरंकुशताको विरोधमा लडेर नेपाली जनताले दोस्रोपटक ०४७ मा प्रजातन्त्र ल्याए तर त्यो पनि आक्रमणमुक्त हुन सकेन । आखिरमा ०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतापछि नेपालीहरू प्रजातन्त्रका निम्ति बारम्बार बाधक बनेको राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति नै कम्मर कसेका हुन् ।
राजतन्त्रका व्यवहारले नै नेपाली जनतालाई त्यस्तो कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनायो । यसरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रोजाइमा केही अपवाद बाहेक धेरैले गणतन्त्र नै रोज्छन् । यो स्वाभाविक हो ।
यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित विधिको शासन चल्नेछ भनेर धेरैले अपेक्षा गर्दछन् ।
लोकतन्त्रको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन उत्तिकै अप्ठारो पनि हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि विधिको शासन कायम हुन सकेन र अराजकता व्याप्त भयो भने निरंकुशतावादीहरू जुर्मुराउँछन्। यो राजनीतिक विकासक्रमको नियम नै हो ।
विक्रम सम्वत् ०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रले सहज तरिकाले विस्थापित गर्यो । जनआन्दोलन ०६२÷६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभित्र कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भयो । त्यही अवधिमा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो, हजारौँ बेपत्ता भए, लाखौँ अपांग भए, हजारौँ विस्थापति भए । ती परिवारका सदस्य अहिले देशमा गणतन्त्र आएकोमा रमाएनन् मात्र, आफ्ना गुमेका, हराएका मानिसका सपनामा पनि अडिन पुगे । घरबाट हराएकाहरू अझै फर्केलान् भनेर बाटो कुर्नेलाई गुणगान गाइएको गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेन ।
त्यसले उनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवास सर्नु मात्र रहेछ भत्रे भान पर्नु स्वाभाविक हो । दलहरूबीच सहमति नभएपछि आशाको केन्द्र बनेका नेताहरूमाथि पनि शंकाहरू उब्जन थाले । सन् १९३२ मा किमले उत्तर कोरियामा जुन रणनीति अवलम्बन गरे, त्यही नीति विसं ०५२ मा रोल्पाबाट सुरूङ युद्धका नाममा माओवादीले सुरू गर्यो ।
तर, अहिले शान्ति प्रक्रियामार्फत खुलमखुला राजनीतिमा आएको माओवादीको एउटा तप्काको रणनीति अन्य दललाई आक्रमण गर्ने र देशमा अस्वस्थ तवरले आफ्नो बसमा शक्ति केन्द्रित गर्ने क्रम जारी छ । जनता गणतन्त्र बुझिरहेका छैनन्, आफूलाई माओवादी भत्रेहरू होटलका आरामदायी कक्षमा गणतन्त्र धुमधामका साथ मनाइरहेका छन् । गाउँमा भोका पेटहरू बढिरहेका छन्, सहरका तारे होटलहरूमा नेपाली गणतन्त्रका रिसाइपहरू पनि बढिरहेका छन् ।
के जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले घोषणा गरेको गणतन्त्रको मोडेल यही थियो, गाउँमा भोको पेट बढ्नु र सहरमा तारे होटल बढ्नु ? गणतन्त्र कुन मोडलको हुने हो भत्रे पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन ।
एकथरी मानिसहरू आफ्नो अड्कलमा गणतन्त्र भनेको राजा फालेर राष्ट्रपति ल्याउनु मात्र हो भत्रे सोचिरहेका छन् भने अर्काथरी मानिसहरू आफूहरूको योगदानको कदर नहुनु नै गणतन्त्रको परिभाषा हो भत्रे सोचिरहेका छन् । तर, विडम्बनाको परिस्थिति हो । यसका कारक नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् । केवल लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा मात्र बाहिर प्रचारमा आएको छ ।
गणतन्त्रको अर्थवाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वविधालय क्यामव्रिजका परिभाषा सापट लिँदैछौ जसअनुसार रिपब्लिक अर्थात् गणतन्त्रात्मक शाषण पद्धति भनेको यस्तो राज्यव्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनता द्धारा चुनिएका प्रतिनीधीहरूले शासन गर्दछन् । नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागी राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी मात्र हुन पाउने थियो ।
समयको परिवर्तन, आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेका छन् । नेपालका एकीकरण नायक पृथ्वी नारायण शाह पश्चात् नै एकात्मक शासण पद्धतिमा शाषित भएको यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरूआतकालिन पाइला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै थोरै मात्र साना देशहरूमध्ये पर्दछ ।
देश गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । तर, गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संघर्षमा उत्रिएका युवा तथा अन्य आममानिसलाई यतिका वर्षसम्म पनि गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन । मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणापछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कसीमा देश अधोगतिमा गएको देखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा अलिकति सहरीकरण, अलिकति शिक्षा, अलिकति चेतनाको कारण मुलुकले प्रगतिको बाटो लिएको देखिए पनि सरकारको अस्थिरता र अदूरदर्शी एवं स्वार्थ प्रेरित खिचातानीका कारण जनतामाझ विश्वास पलाउनै सकेन । राजनीतिक दलले आफूभित्रबाट मुलुकको का ‘भाग्य’ निर्माण गर्ने क्रममा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु, एक देशबाट अर्को देशमा काम गर्न जानुलाई अनुचित भत्र सकिँदैन ।
तर, निराशाका कारण पलायन हुनुचाहिँ अवश्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । झन्डै ४० लाख नेपाली अहिले मुलुकबाहिर छन् । समाजको चारित्रिक ढाँचा नराम्रोसित बिथोलिएको छ । ती ३० लाख नागरिक आफ्ना आमा, बाबु, पति, छोराछोरी नेपालमै छाडेर विदेसिएका छन् । विदेसिएका चेलीहरूको कारूणिक कथा दिनहुँ जसो सञ्चारमाध्यममा प्रकट हुने गरेको छ । हुन त यस्तो अवस्थाको सानो अंशियार संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका कांग्रेस–एमालेलगायत अन्य दल पनि हुन् ।
जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । अब त, विसं ०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ ।
जनताले गणतन्त्र आएपछि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ, महिलाविरूद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि केही न केही कदम चालिन्छ, देश विकासका सबैभन्दा बाधक बनेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा केही कमी आउ छ भत्रे अपेक्षा पनि जनताको थियो तर त्यस्तो भयो त ? अहिले यस्तो सबैतिर सुनिन्छ । गणतन्त्र नेपाल दश वर्ष पूरा भई एघारौँ वर्षको शिशु अवस्थामा छ ।
अमेरिका, फ्रान्स, भारत, चीनलगायत विश्वका कुनै पनि राष्ट्र गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्दा वर्तमान नेपालको अवस्थाभन्दा किमार्थ शान्त र समृद्ध थिएनन् । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प पुनः राजसंस्था हुन सक्तैन । गणतन्त्र घोषणा भएपछि बल्लतल्ल ०७२ असोज ३ गते मुलुकले नयाँ जनअनुमोदित संविधान बनाउन सफल भयो । त्यसैगरी, स्थानीयस्तर, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरको निर्वाचन सुसम्पन्न भइसकेको छ ।
देशमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दलले बहुमत प्राप्त दल पाँच वर्षको लागि सरकार चलाइरहेको अवस्था छ । अब भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि विकास हुने कुरामा जनता विश्वास्त रहेका छन् । ठूला दल, साना दल, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूप आदि इत्यादिमै अहिले पनि नेपाली जनमानस अल्झिएकोे, रूमल्लिरहेको छ ।
जैविक विविधतामा दीर्घकालीन पर्यटन
Posted on May 28, 2018 by bishownath
विश्वमा जैविक विविधताको महत्वलाई दर्शाउन सन् १९९२ मे २२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि अगाडि बढाउने निर्णय सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सन् १९९४ देखि जैविक विविधता दिवस मनाउने थालनी गरिएको थियो । यसको साथसाथै जेनेरियो सम्मेलनको निर्णयलाई सन् २००० डिसेम्बर २२ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकको निर्णय नम्बर ५५ र २०१ ले थप अंगीकार दिएको थियो । हाम्रो देशमा भने कानुनतः नेपालमा भने जैविक विविधतालाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार व्याख्या गरिंदै जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजातीय प्रणाली र वंशाणुगत प्रणालीको विविधता भन्ने बुझिन्छ । भू–परिवेष्ठित देशका मान्छे समुद्र देख्दा रमाउँदछन् अनि हिमाल पहाड नदेखेका मानिस हिमाल पहाड देखेर रमाउँदछन् । यो मानवको स्वभाव हो, विविधतामा रमाउने । त्यसैले त हरेक मान्छेभित्र एउटा पर्यटकको तृष्णा लुकेको हुन्छ ।
अरबको मरुभूमिमा बसोबास गर्ने मान्छे हिमाल हेर्न नेपाल आउँदछ, विश्वभरिका मान्छे सगरमाथा, यहाँका जैविक विविधता, प्रकृति, वनस्पती, जनावर, चराहरु आदि हेर्न नेपाल आउँछन् । तसर्थ नेपालसँग यी जैविक र भौगोलिक विविधता नहुने भए यहाँ पर्यटकहरु आउँदैन थिए पनि होला । त्यस अर्थमा पनि जैविक विविधतालाई पर्यटनसँग जोडेर हेरिन्छ । यसरी पर्यटकीयरुपमा अत्यन्त सम्भावना भएको हाम्रो देश विश्वमै २५ औं स्थानमा छ । यहाँ छोटो दुरिमा धेरै भौगोलिक संरचना, भिन्नभिन्न मौसम एवं भीर, पहरा, गल्छी र उपत्यकाहरु छन् । पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रमा उत्तर (दक्षिण दुवैतिर फर्केका भित्ता पाखाहरूका कारण एकातिर घामलाग्ने र अर्कोतिर ओसिलो हुन्छ । घण्टाभरि मात्र पनि यात्रा गर्ने हो भने नितान्त फरक प्राकृतिक माहौलमा पुगिन्छ, जैविक विविधता अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपालमा समुद्र सतहदेखिको न्यूनतम उचाइ ६० मिटरको झापा जिल्लाको केचना र अधिकतम उचाई आठ हजार आठ सय ४८ मिटरको सगरमाथा छ । नेपालमा दुई सय सात प्रजातिका स्तनधारी, आठ सय ६७ प्रजातिका चरा, ४३ प्रजातिका उभयचर, एक सय प्रजातिका सरिसर्प र एक सय ८५ प्रजातिका माछा, छ सय ५३ जातका पुतली, तीन हजार नौ सय ६६ भन्दा बढी राति उड्ने पुतली, पाँच हजार बढी कीरा, दुई सय प्रजातिका माकुरा र छ हजार बढी फुल फुल्ने वनस्पति, चार सय ७१ प्रजातिका झ्याउ, एक हजार आठ सय २२ प्रजातिका ढुँसी र तीन सय ८३ प्रजातिका उन्यूहरू रहेको तथ्य छ । वनस्पतिमा गुराँस प्रजातिको संख्या नै ३० वटाभन्दा बढी छ । सुनगाभा र सुनाखरी परिवारका तीन सय ६३ भन्दा बढी प्रजाति छन् । सम्पूर्ण युरोपको भूभागमा भन्दा नेपालमा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् । पुतलीको सबैभन्दा धेरै प्रजाति नेपालमै पाइन्छ । नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी प्रजातिका अन्नबाली खानयोग्य छन् । त्यसमध्ये दुई सय प्रजातिको खेति गरिन्छ । यी विविधताहरु सदा सर्वदा कायम हुन् र तिनको संस्थागत संरक्षण र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला र समुदायको उल्लेखनीय भूमिका रहेको सम्बन्धित विज्ञहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ  । यसै सन्दर्भमा हाम्रो देशमा पनि पर्यटनको घुइरो लाग्ने वातारण बनाउन सकिन्छ  । यी विविध कारणहरुले गर्दा राष्ट्रमा आर्थिक विकासमा पर्यटन पनि एक मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको छ । देशको बाह्य विश्वसँग आफ्नो निर्यात व्यापार नहुँदा र नेपालीहरु विभिन्न देशमा गएर रेमिट्यान्स आर्जन नगर्दासम्म पर्यटन नै वैदेशिक मुद्रा आजको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको थियो । हाल पनि पर्यटनले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई/तीन प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक विकास गर्ने हो भने यो भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने प्रवल सम्भावना छ । वातावरणमा रहेको जीव जन्तु तथा वनस्पतिको विविधता वा प्रचुरता यसले वातावरण कति स्वास्थ्य छ भन्ने जनाउँद छ ।
यी विविधता, वातावरणीय विविधता, रहन सहनको विविधता, अणुवांशीय विविधता, नेपालको जैविक विविधताहरु भित्र पर्दछ । त्यस्तैगरी उन्यू, च्याउ, लेउ वा झ्याउलाई छोडेर फूलै फुल्ने वनस्पति प्रजातिको संख्या नेपालमा पाँच हजार आठ सय ५६ छ । गुराँस प्रजातिको संख्या मात्रै ३० नाघ्छ भने सुनगाभा र सुनाखरी परिवारमा तीन सय ६३ भन्दा बढी प्रजाति छन् । प्रिमुलाका प्रजाति पनि ६० भन्दा बढी छन् । सपूर्ण अमेरिकी भू–भाग(महादेश)मा भन्दा नेपालमा धेरै प्रजाति का चराहरू पाइन्छ । त्यसरी हाम्रो देशमा पुतलीको सबैभन्दा धेरै प्रजाति पाइन्छ । विश्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ब्राजीलपश्चात सबैभन्दा धेरै जैविक विविधता भएको देश नेपाल हो । नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिले धनी मानिए पनि यहाँका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा र त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्न नसक्दा एकातिर जैविक विविधतामा खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर सिमसारसँग जोडिएका जैविक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व पनि ओझेलमा पर्न पुगेका छन् । नेपालमा ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर जमिन सिमसारले ओगटेको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो र यससँग सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वलाई बढीभन्दा बढी उजागर गर्ने अनि स्थानीय जनसमुदायलाई त्यसमा संलग्न गराउने हो भने पक्कै पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण हुन्छ र यसलाई आयस्रोत वृद्धिको माध्यमका रुपमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।पृथ्वीको अस्तित्व जोगाउनका लागि वनस्पति संरक्षण गर्नु अनिवार्य छ । वनस्पति मात्र यस्ता सजीव हुन् जसले सौर्य ऊर्जालाई रासायनिक ऊर्जामा रूपान्तरण गरेका हुन्छन् । यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो । यदि, वनस्पति नहुँदा हुन् त सौर्य ऊर्जा पारिस्थितिक प्रणालीमा खाद्य सञ्जालको रूपमा जान सक्दैनथ्यो । जसले गर्दा पारिस्थितिक प्रणाली नै सिर्जित हुन सक्दैन थियो । सजीव तथा निर्जीवहरूको अन्तर्सम्बन्ध कायम हुन नसकेपछि जीवित पर्यावरण पनि रहँदैन । यसैबाट वनस्पति र वातावरणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध अनुभूति गर्न सकिन्छ । सूक्ष्म लेउ, काइ, ढुसी, झ्याउ, च्याउ, उन्यू, जिम्नोस्पर्मस, एन्जिओस्पर्मस जस्ता सजीवहरू नै वनस्पति हुन् । सम्पूर्ण ढुसी र अन्य केही वनस्पतिबाहेक सबै वनस्पति प्रकाश संश्लेषण गर्ने भएकाले पारिस्थितिक प्रणालीका उत्पादक हुन् ।
वातावरणमा देखापरेका जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलित हुनका लागि वनस्पति संरक्षण अनिवार्य छ । स्वच्छदेखि नुनिलो पानीसम्म तथा ऊष्णदेखि लेकाली वातावरणमा विविध प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन् । यसरी जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न मानव संस्कारमा वनस्पतिका विविध भाग जस्तै फूल, फल, बीउ, बोक्रा, काठ, जरा आदि प्रयोग हुँदै आएको छ । यसर्थ वनस्पतिले नै यस धर्तीमा जीवित वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छन् । वनस्पतिको विनाशको कारण मौसम परिवर्तन, हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन, विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनलगायतका असर पर्दछन् । आर्थिक विकास र वातावरणको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाट नै दिगो वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । दिगो वातावरण सँगसँगै दिगो विकास अगाडि बढ्न सक्दछ । यसैअनुरूप वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यसैले विकासका काम गर्दा प्रारम्भिक वातावरण सर्वेक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको ठोस कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ । होइन भने विकासका नाममा धेरै विनाश हुन सक्दछ । त्यसैले, वातावरणमैत्री विकासका गतिविधिहरू मात्र सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
जैविक प्रविधि नीति, २०६३ ले जैविक प्रविधिलाई देश विकास र वातावरणीय संरक्षण एवं जनकल्याणको सशक्त आधारको रूपमा प्रतिस्थापन गरी गरिबी निवारणमा योगदान दिने लक्ष्य लिएको छ । नीतिले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, जैविक सुरक्षा, जैविक निगरानी तथा जैविक नैतिकता जस्ता विषयहरूलाई पनि सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । वन ऐन–२०४९, वन नियमावली–२०५१, बिरुवा संरक्षण ऐन–२०६४, बिरुवा संरक्षण नियमावली–२०६६ को सबल कार्यान्वयन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म वनस्पति र वातावरणसम्बन्धी समस्या हल गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देश जैविक विविधताका दृष्टिले धनी मानिए पनि यहाँका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा र त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्न नसक्दा एकातिर जैविक विविधतामा खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर सिमसारसँग जोडिएका जैविक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व पनि ओझेलमा पर्न पुगेका छन् । हाम्रो देशमा ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर जमिन सिमसारले ओगटेको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो र यससँग सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वलाई बढीभन्दा बढी उजागर गर्ने अनि स्थानीय जनसमुदायलाई त्यसमा संलग्न गराउने हो भने पक्कै पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण हुन्छ र यसलाई आयस्रोत वृद्धिको माध्यमका रुपमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आगामी सन् २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजनासँगै सन् २०१८ मा ’नेपाल घुम्ने वर्ष’ मनाउने तयारीका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको पाइन्छ । प्राकृतिक रूपमै पर्यटक लोभ्याउने सुन्दरस्थल नभएका कतिपय देशले पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेर प्रशस्त पर्यटक भित्र्याई देशको आयआर्जनको पहिलो स्रोत बनाउन सकेका छन् । तर, हामी भने प्रकृतिले चिरिच्याट्ट पारिदिएको पर्यटकको मनै लोभ्याउने विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल भएर पनि पर्यटक तान्न सकिरहेका छैनौं । बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनेझैं नेपाल सुन्दर एवम्ं विविधतायुक्त पर्यटकीय स्थल भएर पनि प्रचार–प्रसारको अभावमा ओझेल परेको छ । कुनै पनि काम योजनाबद्ध ढङ्गले गर्ने हो भने थोरै लगानीमा अत्यधिक लाभ लिन सकिन्छ । तर, मुलुकले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि थोरै गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सक्ने भए पनि थोरै काम पनि राम्ररी गर्न सकेन ।
यथार्थमा भन्ने हो भने पर्यटन राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । अब भने रणनीतिक योजना बनेको छ । यसअनुसार सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर समयबद्ध किसिमले काम गर्न सक्यो भने पर्यटन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । हुन त रणनीतिक योजनामा कमीकमजोरी नभएका होइनन् । निजीक्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सरकारी लगानीबारे योजनामा विश्लेषण गरे पनि कुन क्षेत्रले के काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, यसबाट फाइदा लिने पक्षको को हुन् भन्नेबारे स्पष्ट योजना भने छैन । हुन त यो पर्यटनका लागि मार्गदर्शक नीति हो । यो पर्यटनका लागि आजसम्मको आधिकारिक अध्ययन हो र यसमा आएका तथ्यांकहरू पर्यटन क्षेत्रमा आगामी योजना बनाउन र लगानी गर्न निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । विगतको पर्यटन नीतिमा कार्ययोजना नभएकाले ती त्यति उपयोगी भएनन् । तर, यो रणनीतिक योजना भने बढी भिजिनरी छ । यसरी जैविक विविधताका क्षेत्रमा संरक्षण संवद्र्धन गरी पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने हो भने एकदुई वर्षमै अहिलेको पर्यटकको संख्यालाई दोब्बर पार्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ ।
Source : http://www.sulsule.com/news_details/19108/.html-750214.
Archives Select Month June 2018 (5) May 2018 (9) April 2018 (7) March 2018 (4) February 2018 (6) January 2018 (7) December 2017 (8) November 2017 (3) October 2017 (3) September 2017 (1) July 2017 (4) June 2017 (4) May 2017 (5) April 2017 (7) March 2017 (4) February 2017 (12) January 2017 (8) December 2016 (8) November 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (4) June 2016 (6) May 2016 (5) April 2016 (1) March 2016 (7) February 2016 (4) January 2016 (5) December 2015 (4) October 2015 (3) September 2015 (2) July 2015 (1) June 2015 (1) May 2015 (20) April 2015 (3) March 2015 (4) February 2015 (11) January 2015 (6) November 2014 (11) October 2014 (16) September 2014 (11) August 2014 (34) July 2014 (8) June 2014 (18) May 2014 (20) April 2014 (11) March 2014 (36) February 2014 (15) January 2014 (35) December 2013 (38) November 2013 (24) October 2013 (22) September 2013 (15) August 2013 (14) July 2013 (7) June 2013 (16) May 2013 (10) April 2013 (16) March 2013 (10) February 2013 (15) January 2013 (29) December 2012 (37) November 2012 (86) October 2012 (85)